Metal Ukunyathela Izahlulo For Isixhobo Home
Isixhobo esiqhubekayo semoto
Isixhobo esiqhubekayo seMoto, isiqwenga sesixhobo seGESTAMP sathunyelwa eSpain, ubukhulu bezinto yayiyi-3.0mm, umbandela wawuyiJSH599R. Isixhobo senza izitishi ezili-16, ubungakanani besixhobo sasiyi-3350mm * 750mm, i-punch tonnage yayiyi-1000T, kwaye ubunzima be-mold yi-4.3T. Isixhobo sokuqala sanamhlanje, uvavanyo lwesayizi 8 ...Funda ngokugqithisileyo »
Iimveliso zentsimbi yangasemva
Le yimveliso yesixhobo esiqhubekayo semoto yangasemva. Umthengi wale mveliso ufuna ukuba i-bayonet yesangqa sangaphakathi itape eqaqambe ngokupheleleyo enobunzima obukodwa obuyi-14.8mm. Sinee-burrs, i-deformation kunye neebhendi zinyembezi kwi-bayonet yesangqa sangaphakathi ngexesha lovavanyo lokuqala lokungunda. Emva kwetyala ...Funda ngokugqithisileyo »
Ukukhanya okuluhlaza okwesibhakabhaka kwengalo
Ixesha Post: Jun-02-2021
Senza uhlolo lwedatha yokukhanya eluhlaza okwesibhakabhaka yokwenza, ukubumba, kunye namalungu eemela, kwaye sinike abathengi ngeengxelo zokuhlola ze-3D. Umgangatho kunye nokuchaneka kwesixhobo kuphuculwe kakhulu.Funda ngokugqithisileyo »
Iimveliso zensimbi ezingenasici
I-AT = 8.0 izinto zentsimbi ezingenazintsimbi zithunyelwa e-United States, zibetha i-5.3mm ngaphakathi, isicelo sebhanti eqaqambileyo, sisebenzise i-16mm ubukhulu be-T, i-5.3mm ubude be-7.5mm ukuhlangabezana neemfuno zabathengi, ngoku i-50,000 ngenyanga iziqwenga ziyimveliso yabathengi . Senze i ...Funda ngokugqithisileyo »
Ixesha lokuposa: Meyi-20-2021
T = 0.9 yeemveliso zealuminium. Umthengi ucele umtya ophakathi. Umtya awuzinzanga xa siqala ukuzama isixhobo. Indlela yokongeza isiqwenga esikhulu semathiriyeli ukufezekisa ukoneliseka kwabaxumi sifezekisiwe. Ngoku izixhobo sele ziqalisile ukwenza isampulu kunye novavanyo ...Funda ngokugqithisileyo »
Imveliso yolwimi olukhiyekileyo
Uvalela iimveliso zolwimi ezithunyelwa eUnited States ngokuqhubekekayo zivelise iziqwenga ezingama-300,000 kubathengi, kwaye ukungunda okwangoku kunye neemveliso zisiwe kubathengi kwimveliso. Sichithe iiveki ezintlanu sisenza izixhobo, iiveki ezi-2 zokulungisa ingxaki, kunye neveki e-1 kwimveliso ...Funda ngokugqithisileyo »
Iimveliso zokubamba imithwalo yehardware kunye neemveliso zombane zasekhaya
Esi sisixhobo semathiriyeli esineemveliso zokuphatha imithwalo yentsimbi kunye nezixhobo zasekhaya. Iimveliso zitofelwe eMelika. Ngexesha lokwenziwa kwesikhunta, sisebenzise i-TICN ukutyabeka iziqhoboshi ukwenza izinto zomngundo kunye neepunch ukukhulisa ukunganyangeki ngexesha lokuvelisa. Ikhomishini ...Funda ngokugqithisileyo »
hardware bexhentsa die inxalenye
Izixhobo zeHardware ezithunyelwe eCanada. Emva kwentsebenziswano yokuqala kunye nomthengi, siye safumana imvume yoMthengi. Ngexesha lesibini umthengi ebeka iodolo, sikwabonelela abathengi ngomgangatho ophezulu kunye nenkonzo. Ngeli xesha, siqhubile ngemvumelwano eneenkcukacha ...Funda ngokugqithisileyo »
Imveliso izixhobo iindawo
Silungile ekuqhubekeni kwamalungu ahlukeneyo ngokuchanekileyo, sinokubonelela ngokwezifiso kunye nokwenza ngokwezifiso imveliso ngokweemfuno zabathengi. Silawula ngokungqongqo umgangatho kunye nayo yonke ikhonkco ...Funda ngokugqithisileyo »
Izixhobo zeAluminiyam zihanjiswa ngexesha
Kusithathe iiveki ezili-10 ukuhambisa iiseti ezimbini zezixhobo zealuminium ngexesha, kunye neeveki ezi-2 zoyilo, iiveki ezi-3 zokulungiswa, iiveki ezi-4 zokuhlanganisana kunye nokulungisa ingxaki, kwaye inkqubo yokugqiba yagqitywa kwiveki e-1 emva kokwamkelwa, kwaye izixhobo zathunyelwa ngaphandle Brazil. Enkosi nge tr ...Funda ngokugqithisileyo »
Isixhobo sokuhambisa ngenqanawa
Thumela ngenqanawa eMexico ； Ubungakanani bezixhobo: 3200 * 1200 ； MAT'L: 380 HSLA time Ixesha elikhokelayo: 12week process Inkqubo yokuqhekeza: I-Pierce fat plot-Sika-Sika — Yahlula-Gobela ezantsi uze wenze ingqekembe — usukele ezantsi — yenza phezulu — Phantsi uye ezantsi — Isangqa ezantsi-i-CAM-restrike -Pierce-Pierce Chamfer C0.5 – Yahlule Funda ngokugqithisileyo »
Ukuthumela ngenqanawa eMexico
Ukuhambisa ngenqanawa eMexico, iAluminiyam yezixhobo, ubungakanani bezixhobo 1700 * 1450 * 900, ixesha lokuhambisa elili-12week Funda ngokugqithisileyo »
IPaki yeSayensi neTekhnoloji yaseHongye, inombolo 359, iNdlela yezeMfundo, iDalingshan Idolophu, kwiSixeko saseDongguan, kwiPhondo laseGuangdong
Isixhobo esiqhubekayo seMoto, isiqwenga sesixhobo seGESTAMP sathunyelwa eSpain, ubukhulu bezinto yayiyi-3.0mm, umbandela wawuyiJSH599R. Isixhobo senza izitishi ezili-16, ubungakanani besixhobo sasiyi-3350mm * 750mm, i-punch tonnage yayingu-10 ...